Zimbabweans Living in Diaspora Applaud Mass Stay Away
Isabel Mwonzora - Tajamuka
Some Zimbabweans in the diaspora say they joined their counterparts in Zimbabwe in solidarity with the mass stay away throughout the country in protest against alleged government misrule.
Some Zimbabweans in South Africa staged a peaceful protest at the Zimbabwean consulate in Johannesburg. Isabel Mwonzora, a Zimbabwean based in Johannesburg, said their protest was in solidarity with people back home.
Tajamuka South African Demo
​"We wanted to do our part in showing our disapproval of how things are being run at home. We are part of Tajamuka a non-political grouping that is calling for the government to step down for allegedly failing to run the country," said Mwonzora.
​Another Zimbabwean, Zvidzai Ruzvidzo, based in the United States, said he used social media to distribute news on the situation at home as a way of supporting the stay away today.
​Zimbabweans on Wednesday heeded the call for a mass stay away and remained at home with some engaging skirmishes with the police in Harare and Bulawayo.
Panel Discussion With Isabel Mwonzora And Zvidzai Ruzvidzo